Ukuhambelana kweCapricorn-Uthando, iSex, Trust & Life - I-Capricorn
Ukuhambelana kweCapricorn kunye nezinye iimpawu x
Ubudlelwane phakathi kwe-Aries kunye neCapricorn yimbonakaliso yeemfuno zabo zokungaziqondi ukuba bamkele eyona nto ibacaphukisayo. Badinga iitoni zentlonipho kunye nomonde ukoyisa ubunzima benkani ekwabelwana ngayo kunye notyekelo lokuwela imida yomnye nomnye ...
Yintoni ebonakala iqinile kwaye ibanda kwiCapricorn, iTaurus ifumana ubunzulu kwaye inomdla. Yintoni ebonakala ivila kwaye i-static kwiTaurus, iCapricorn ibona njengomngeni ukuhamba. Bobabini banokuchukumisa omnye komnye, kwaye banokwanelisa iimfuno zomnye nomnye ngaphandle kokukhetha ukuba babeke iintliziyo zabo kuyo ...
Ubudlelwane beGemini kunye neCapricorn ngokuqhelekileyo kuzama ukuphefumla uMoya eMhlabeni, ukwenzela ukuba kubekwe uphawu loMoya weGemini kunye nokuthambisa uMhlaba weCapricorn. Xa bengacaphukisi omnye nomnye, banokusebenzisa nantoni na kunye ...
Umhlaza kunye neCapricorn zimele i-axis yosapho, imfuzo kunye nemibuzo yenkolelo. Umnqweno wabo wokuba kunye unokuba namandla ngokungalawulekiyo, kuba babonisa uthando kunye nomtsalane wezinyanya zabo ...
Ubudlelwane bukaLeo kunye neCapricorn bunokuba ngumceli mngeni kakhulu, kunye neempawu zozibini ezizimiseleyo nezingashukumiyo. Nangona kunjalo, ukuba bafumana injongo efanayo, akukho nto bangenakukwazi ukuyenza kunye ...
Virgo kunye Capricorn njengobunzulu kuyo yonke into ebomini, ubudlelwane babo ngokunjalo. Eyona nto ingcono abanokuyenza kukuphumla, ukuphefumla, kwaye ungene kolu nxibelelwano luhle, lunentlonipho ...
Xa iLibra kunye neqabane likaCapricorn lithandana, izinto ziya kuxhomekeka kakhulu kwixesha labo. Ukuba badibana xa bevuleleke ngokweemvakalelo zomnye nomnye, baya kuhlala kunye ixesha elide ...
I-Scorpio kunye neCapricorn zenza isibini esikwaziyo ukwenza impumelelo engakholelekiyo, enzulu kwaye ethembekileyo, ngokugxila okucacileyo omnye komnye nakubudlelwane babo ...
I-Sagittarius kunye neCapricorn benza isibini sabakhuseli, imboni kunye nomakhi, okwazi ukwenza nantoni na abavumelana ngayo ngomzamo omncinci ...
Amaqabane amabini eCapricorn anokuba nenkani, aqine kwaye akruquke kunye. Bahlala befuna umntu othe chatha ngakumbi kunye neemvakalelo ukubagcina belungelelene kwaye akuyi kuba lula kubo ukuba badlale indima ethambileyo abayidingayo ebomini babo ...
I-Capricorn kunye ne-Aquarius baya kufumana ulwimi ekwabelwana ngalo ixesha elide njengoko begcina umgama othile omnye komnye. Ukuba bathe basondela ngokwaneleyo kwaye bafumana ukusondelana, ubunzulu bayo buya kuphinda bubekho kubo bobabini ...
I-Capricorn inokuzinzisa iiPisces kangangoko iiPisces ziya kukhuthaza iCapricorn. Isiphumo sobudlelwane babo sixhomekeke kwiinkolelo zabo ekwabelwana ngazo kunye nemida abayibeka omnye komnye xa iCapricorn iqina kakhulu kwaye iPisces inqabile ...
Isagittarius Virgo Gemini Emanzini Aries